အဘဖေါ ပေါ်တာ အဆွဲခံရခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အဘဖေါ ပေါ်တာ အဆွဲခံရခြင်း
အဘဖေါ ပေါ်တာ အဆွဲခံရခြင်း
Posted by Foreign Resident on Sep 7, 2012 in Creative Writing, Think Different | 45 comments
အဘဖေါ ပေါ်တာ အဆွဲခံရခြင်း ။
( သို့မဟုတ် )
အဘ ရဲ့ ဥရောပ ပစ္စည်းထမ်း ပေါ်တာ ခရီးစဉ် ။
အဘ ဘဝ ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ဗီတို ပိုင်ရှင် ၊
Home Minister ရဲ့ တစ်ချက်လွှတ် အမိန့်တော်အရ ၊
အဘ ဥရောပဖက်ကို ပစ္စည်းထမ်း ပေါ်တာ လိုက်သွားရပါပြီ ခည ။
စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့ စထွက်ပြီး ၊
အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့ မှ ပြန်ရောက်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ။
စုစုပေါင်း ပေါ်တာ ခရီးစဉ် တစ် လ နှင့် ၃ ရက်ကြာပါမယ် ခည ။
အလုပ်ကြမ်း ပေါ်တာ မိမဲ့ နေရာတွေကတော့ ၊
အင်္ဂလန် ၊ ပြင်သစ် ၊ စပိန် ၊ အီတလီ ၊ သြစတြီးယား ၊ ဆွစ်ဇာလန် ၊
လိုင်ချိန်စတိန်း ၊ ဂျာမဏီ ၊ ဟော်လန် ၊ အင်္ဂလန် တို့ ဖြစ်ပါတယ် ။
မန္တလေး ဂဇက် ကို ခေတ္တ နှုတ်ဆက် ခွဲခွာ ခဲ့ပါတယ် ။
လိမ်လိမ်မာမာ နေရစ်ကြနော် ၊
အခုလို ရန်ဖြစ်မနေကြနှင့်ဦး ။ ဟီ ဟိ ။
တာ့ တာ ၊ မန္တလေး ဂဇက် ကြီး ။
Departure Sydney ( 11-Sep-2012 )
London Day 1 ( 12-Sep-2012 ) ( ENGLAND )
ARRIVAL LONDON – FREE INDIVIDUAL TOUR
Hotel: Hilton Kensington Hotel, London
London Day2( 13-Sep-2012 ) ( ENGLAND )
LONDON – FREE INDIVIDUAL TOUR
London Day3( 14-Sep-2012 ) ( ENGLAND )
TRAFALGAR GREAT EUROPEAN TOUR PACKAGE
Day 1 ( 15-Sep-2012 ) ( ENGLAND & FRANCE )
Meal(s): (Welcome Reception) Hotel: Renaissance La Defense, Paris (SF)
Day2( 16-Sep-2012 ) ( FRANCE )
PARIS SIGHTSEEING FREE TIME
Admire panoramic views of the city from the second level of the Eiffel Tower. Drive along the Champs Élysées to the Arc de Triomphe on your sightseeing tour with an expert Local Guide. See Notre Dame Cathedral. Discover the delights of the city on your own this afternoon or perhaps take an excursion to the Louvre.
Hotel: Renaissance La Defense, Paris (SF)
Day3( 17-Sep-2012 ) ( FRANCE )
Meal(s): (Buffet Breakfast / Dinner) Hotel: Mercure Bordeaux Centre, Bordeaux (F)
Day4( 18-Sep-2012 ) ( FRANCE )
Meal(s): (Buffet Breakfast / Dinner) Hotel: Mercure Lourdes Imperial, Lourdes (F)
Day5( 19-Sep-2012 ) ( FRANCE & SPAIN )
LOURDES – BIARRITZ – BURGOS
Meal(s): (Buffet Breakfast / Dinner) Hotel: Puerta de Burgos, Burgos (F)
Day6( 20-Sep-2012 ) ( SPAIN )
BURGOS – MADRID (2 NIGHTS)
Meal(s): (Buffet Breakfast) Hotel: Holiday Inn Madrid, Madrid (F)
Day7( 21-Sep-2012 ) ( SPAIN )
Marvel at the city’s most important landmarks on your morning sightseeing tour with an expert Local Guide including views of the Royal Palace and Plaza de España. Later, consider an optional excursion to the fascinating city of Toledo.
Hotel: Holiday Inn Madrid, Madrid (F)
Day 8 ( 22-Sep-2012 ) ( SPAIN )
Meal(s): (Buffet Breakfast) Hotel: Abba Sants Barcelona, Barcelona (F)
Day9( 23-Sep-2012 ) ( SPAIN )
Hotel: Abba Sants Barcelona, Barcelona (F)
Day 10 ( 24-Sep-2012 ) ( SPAIN & FRANCE )
Meal(s): (Buffet Breakfast) Hotel: Amarante Hotel, Cannes (F)
Day 11 ( 25-Sep-2012 ) ( FRANCE )
Free time in Cannes this morning before your visit to the Fragonard Perfumery. (BB)
Hotel: Amarante Hotel, Cannes (F)
Day 12 ( 26-Sep-2012 ) ( FRANCE & ITALY )
See the Royal Palace in Monaco and the cathedral where Princess Grace is buried. Pass Genoa Columbus’ birthplace to Pisa where you view the incredible Leaning Tower. Spend the night in the Renaissance city of Florence. (BB D)
Meal(s): (Buffet Breakfast / Dinner) Hotel: Grand Hotel Mediterraneo, Florence (F)
Day 13 ( 27-Sep-2012 ) ( ITALY )
Meal(s): (Buffet Breakfast / Dinner) Hotel: Windsor Savoia, Assisi (F)
Day 14 ( 28-Sep-2012 ) ( ITALY )
Meal(s): (Buffet Breakfast) Hotel: Johanna Park Sorrento, Sorrento (F)
Day 15 ( 29-Sep-2012 ) ( ITALY )
Hotel: Johanna Park Sorrento, Sorrento (F)
Day 16 ( 30-Sep-2012 ) ( ITALY )
Meal(s): (Buffet Breakfast) Hotel: Aran Mantegna, Rome (F)
Day 17 ( 1-Oct-2012 ) ( ITALY )
Hotel: Aran Mantegna, Rome (F)
Day 18 ( 2-Oct-2012 ) ( ITALY )
Meal(s): (Buffet Breakfast / Dinner) Hotel: Grande Albergo Ausonia & Hungaria, Venice (SF)
Day 19 ( 3-Oct-2012 ) ( ITALY )
Appreciate this Byzantine city during your private canal cruise. See St. Marks Square. View the Bridge of Sighs. Visitaglass-blowing factory, then explore on your own.
Hotel: Grande Albergo Ausonia & Hungaria, Venice (SF)
Day 20 ( 4-Oct-2012 ) ( ITALY & AUSTRIA )
Meal(s): (Buffet Breakfast) Hotel: Renaissance Wien, Vienna (SF)
Day 21 ( 5-Oct-2012 ) ( AUSTRIA )
Your expert Local Guide shows you the sights, including views of the famous Opera House, Hofburg Palace, Stadtpark, Parliament and Imperial Boulevards. The rest of the day is yours to explore.
Hotel: Renaissance Wien, Vienna (SF)
Day 22 ( 6-Oct-2012 ) ( AUSTRIA & GERMANY )
Meal(s): (Buffet Breakfast / Dinner) Hotel: Hilton Munich Park, Munich (MD)
Day 23 ( 7-Oct-2012 ) ( GERMANY, LIECHTENSTEIN & SWITZERLAND )
Meal(s): (Buffet Breakfast / Dinner) Hotel: Grand Europe, Lucerne (F)
Day 24 ( 8-Oct-2012 ) ( SWITZERLAND )
Hotel: Grand Europe, Lucerne (F)
Day 25 ( 9-Oct-2012 ) ( SWITZERLAND & GERMANY )
LUCERNE – FREIBURG – HEIDELBERG – RHINE CRUISE – BOPPARD
View the cathedral at Freiburg and the impressive Heidelberg Castle. Enjoy the scenery as you cruise down the Rhine to Boppard.
Meal(s): (Buffet Breakfast / Dinner) Hotel: Best Western Bellevue Rhine Hotel, Boppard (F)
Day 26 ( 10-Oct-2012 ) ( GERMANY & NETHERLAND )
BOPPARD – COLOGNE – AMSTERDAM
Stop to visit Cologne’s magnificent Gothic cathedral. Cruise through Amsterdam’s canals inaglass-topped boat. See Dam Square and the Mint Tower. Tonight, join your companions foradelicious Farewell Dinner.
Meal(s): (Buffet Breakfast / Farewell Dinner) Hotel: Mercure Aan De Amstel, Amsterdam (F)
Day 27 ( 11-Oct-2012 ) (NETHERLAND & ENGLAND )
London Day4( 12-Oct-2012 ) ( ENGLAND )
LONDON – FREE INDIVIDUAL TOUR & DEPARTURE LONDON
Arrival Sydney ( 13-Oct-2012 )
Hotel Class Key D: Deluxe, F: First Class, SF: Superior First Class,
Bordeaux Orientation of the capital of the Aquitaine region.
Lourdes Visit St. Bernadette’s Grotto at this pilgrimage site.
Biarritz Visit this Atlantic surf resort in the Basque territory.
Burgos Visit the city of El Cid.
Madrid Sightseeing tour and included visit to the famous Prado Museum.
Barcelona View the Sagrada Familia Cathedral.
Cannes See the Film Festival Centre.
Monaco See the cathedral and palace in the Old Town.
Pisa View the Leaning Tower in the Field of Miracles.
Florence Admire the panoramic views from Piazzale Michelangelo. Your walking tour takes you to Signoria Square and includes views of the Duomo, Baptistery, Ponte Vecchio and Santa Croce Basilica. Enjoy an included visit to the Academy of Fine Arts to see the originalstatue of David.
Assisi Orientation includes St. Francis’ Basilica.
Sorrento Orientation of this picturesque town.
Isle of Capri Visit this pretty isle.
Rome Sightseeing tour includes views of the ancient Roman Forum, the Colosseum and Circus Maximus. Visit St. Peter’s Basilica.
Venice EnjoyaCanal Cruise by private motor launch. Visit St. Mark’s Square and view theDoge’s Palace, the Bridge of Sighs and St Mark’s Basilica.
Vienna Sightseeing includes the Hofburg and City Hall.
Munich See the Olympic stadium and visit Marienplatz.
Salzburg Sightseeing includes many of “The Sound of Music” locations.
Freiburg View the cathedral.
Heidelberg View the castle perched above the town.
Cologne See the Gothic cathedral.
Amsterdam See Dam Square and Mint Tower.
Welcome Reception Dinner with your Travel Director in Paris.
7 three-course dinners with local wine.
Farewell Dinner with wine in Amsterdam.
A qualified Local Guide in Paris, Madrid, Barcelona, Florence, Pompeii, Capri, Rome, Vienna and Salzburg.
The services of one of Trafalgar’s Local Hosts at Trafalgar’s recommended London hotel
Use of Trafalgar’s new London Reception Centre with Hospitality Desk, free Internet andarange of services and facilities
တခြားမြန်မာတွေ.. သွားလည်ရင်.. သတိထားမိအောင်..
လိုရင်းအချက်လေးတွေချည်းဖြည့်ရေးပြီး.. ဥရောပတခွင်ပြဲပြဲစင် ခရီးသွားဆောင်းပါးရေးပေးပါလား..
စာသိပ်မရှည်.. အခြေအနေကောင်းရင်..နောက်လ.. ပုံနှိပ်သတင်းစာထဲ ထည့်မယ်လေ..
တခြားသူတွေ စာဖတ်ပြီး.. သွားလည်နိုင်တာပေါ့..
ဒီလကတော့… ကိုပေါက်ရဲ့.. ချိုင်းနားခရီးစဉ်ပါသွားပြီ..။
” နောက်လ.. ပုံနှိပ်သတင်းစာထဲ ထည့်မယ်လေ ”
သူကြီးရယ် နောက်လတော့ မှီမယ် မထင်ဘူး ။
ဥရောပက အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့ မှ ပြန်ရောက်မှာလေ ။
ဥရောပက ပြန်ရောက်မှ စရေးလို့ ရမှာလေ ။
ရေးဖို့တော့ စဉ်းစားထားပါတယ် ။
ဓါတ်ပုံ အတွက်တောင် လောလောလတ်လတ်
နီကွန် D-5100 ကြီး ဝယ်ထားသေးတာပဲ ။
” စာသိပ်မရှည်.. အခြေအနေကောင်းရင် ”
တစ်လ နှင့် သုံးရက်စာ ကို ၊
သိပ် ချုံ့လို့တော့ ရမယ် မထင်ဘူး ။
သတင်းစာက.. ၂လတခါဖြစ်နေတာမို့.. နောက်လဆိုတာ..ရှေ့မှာမရှိတဲ့.. နောက်လဖြစ်ကြောင်း..
အခုအဘဖောခရိးစဉ်မျိုး.. သွားသူရှားတာမို့.. အားလုံးခြုံပြီး.. တနိုင်ငံ(တမြို့) တပိုဒ်နဲ့.. ရေးစေလိုကြောင်း..
အင်းးးးးးး ၊ ကို P chogyi ရယ် ။
ခင်ဗျား မသိဘူးနော် ၊
အဘ အခု မန်းဂေဇက်ချစ်သူများ ၊
စာပေဆု ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ထဲ ပါပြီးကတည်းက ၊
နေ့တိုင်း တစ်နေ့ကို မဖတ်မနေရ Post အစိတ်လောက် ၊
တစ်လကို Post ၇၀၀ လောက် ဖတ်နေရတယ် ။
ရွာထဲမလဲ ၊ အခု လပိုင်းမှာ ၊
တကဲ့ Pro Level ရေးနိုင်တဲ့သူတွေ ၊
အများကြီး ဝင်ရေးလာကြတာ သတိပြုမိမှာပါ ။
မျက်လုံးတွေတောင် အားနည်းလာပြီ ၊
အဲဒီတော့ ၊ ကိုယ်တိုင် Post ရေးဖို့ ၊
Idea လေး Feeling လေး ရလာရင်တောင် ၊
ဘယ်လိုမှ တစ်ရက်ထဲ ပြီးအောင် မရေးနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ် ။
Post ဆိုတာလည်း Feeling လာတုံး ၊
တစ်ချီတည်း ပြီးအောင်ရေးလိုက်မှ အဆင်ပြေတာလေ ။
တဝက်မှာ ရပ်ထားလိုက်မိရင် ၊
နောက်တစ်ပိုင်း ဆက်ရေးဘို့ Feeling မလာ တော့ဘူး ။
အခု အဘ ဆီမှာ တစ်ဝက်နှင့် ၊
ရပ်ထားတဲ့ Post နှစ်ခု သုံးခု ရှိတယ် ။
ကို P chogyi မယုံရင် လိုက်ကြည့်ပါလား ၊
ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ထဲ ပါသွားတဲ့ ရွာသူားတွေ အားလုံး ၊
မေါင်ဂီကလွဲရင် အကုန် စာရေးအား ထိုးကျသွားတာကို ။
ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ထဲ ပါတဲ့ ရွာသူားတွေ အားလုံးဟာ ၊
အရင်က ထိတ်ထိတ်ကျဲ ရေးနေတဲ့သူတွေနော် ။
Post ရေးချင်တယ် စဉ်းစားတယ်
အိမ်ကိစ၊ ရုံးကိစ၊ လူမှုရေးကိစ အထွေထွေရှုပ်နေတာနဲ့
ဒါ့ကြောင့် ရေးနိုင်တဲ့သူတွေကို အားပေးတာပါ။
Haveawonderful holiday.!!!!:)
Just wondering why the travel agent did not include Belgium…..
ဟုတ်တယ် Shwe Phyu ရေ ။
TRAFALGAR TOUR နှင့် သွားမှာလေ ။
အဘလည်း ဘာလို့ ဘယ်လဂျီယံ မပါလည်း အံသြနေတာ ။
ဥရောပ တစ်ခါသွားဖို့က လွယ်တာ မဟုတ်ဘူး ။
လေယာဉ်ကို ဖင်ကျိမ်းနေအောင် စီးရတာ ။
တစ်ခုတော့ ကောင်းပါတယ် လေ ။
ဘယ်လဂျီယံ သွားရင် မိန်းမကို လက်စွပ် ဝယ်ပေးနေရဦးမယ် ။ ဟီ ဟိ ။
အဘ Sydney က Cartier နှင့် Tiffany မှာ ဈေး စနည်းနာကြည့်တာ ၊
သူတို့ Standard, Clarity VS1, Color G, Carat 0.75 ကို ၊
A$ 10000 ကျော် ခေါ်တယ် ခည ။
၁ ကာရက် ( ၁ ရတီ ) လောက်ဆို A$ 15000 လောက်ရှိမယ်တဲ့ ၊
ရန်ကုန် စိန်ဈေးထက် ပက်ပက် စက်စက် ဈေးကြီးတယ် ။
မိန်းမ ကလည်း ၁ ကာရက် ( ၁ ရတီ ) ကို သေးတယ်တဲ့ ။
ဟီ ဟိ ။ ဘယ်လဂျီယံ မဝင်တာပဲ ကောင်းပါတယ် လေ ။
ဘယ်လ်ဂျီယန်က flat countryဖြစ်လို့ရယ် သိပ်ပြီးလှတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်လို့ရယ် တစ်ခြားဥရောပနိုင်ငံတွေထက်စာရင် သွားလည်စရာသိပ်မကောင်းပါဘူး။
အခုလို ရှင်းပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ၊
PEACEMAKER ရေ ။
ကိုဖေါရင်းကို ကြိုပြီး ပွဲတောင်းပါတယ်ဗျို့….
ခရီးသွားတဲ့အကြောင်းလေး ခြုံပြီးတော့ ပိုစ့်တပုဒ်ရယ်..
ခရီးသွားဆောင်းပါးအဖြစ် တနေရာတပုဒ်ဆိုသလို အခန်းဆက်ဆောင်းပါး (ကျုပ်အထင်အပုဒ်၃၀လောက်ရမယ်) တွေရယ်….
အဲဒါတွေ အပြန်မှာ တင်ပေးစေလိုပါကြောင်း….
ကုန်ကျစားရိတ် ဒေါ်လာသုံးသောင်းထက် မနည်းမှာမို့ ရိုးရိုးလူတွေ တော်ရုံနဲ့ သွားနိုင်ခဲ၊ ရနိုင်ခဲ တဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အတွေ့အကြုံတွေမို့ တန်ဘိုးရှိ အကျိုးရှိမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း..
” ကုန်ကျစားရိတ် ဒေါ်လာသုံးသောင်းထက် မနည်းမှာမို့ ”
ကို ပါလေရာ ရဲ့ ။
အခုသွားတဲ့ Trafalgar Tour ခရီးစဉ်က ၊
4 Stars နှင့်5Stars အဆင့် သတ်မှတ်တဲ့ ခရီးစဉ် ခည ။
သူ့ အထက်မှာ6Stars နှင့်7Stars အဆင့် သတ်မှတ်တဲ့ ၊
Scenic Tour ဆိုတာတောင် ရှိသေးသဗျ ။
Cost Saver တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ ။
အခု ကျနော်သွားတဲ့ ဥရောပ Land Package ကို ၊
လူတစ်ယောက်ကို $ 6300 သတ်မှတ်တယ် ဗျ ။
သြဇီ ဥရောပ လေယာဉ်ခက အသွားအပြန် $ 2500 ကျတယ် ဗျ ။
Travel Insurance က Unlimited Medical Cover ၊
ယူလိုက်တော့ တစ်ယောက် 250 $ ကျတယ်ဗျ ။
ကျနော်တို့က ရောက်မှတော့ မထူးဘူးဆိုပြီး ၊
အင်္ဂလန်မှာ ၃ ရက် သပ်သပ် ထပ်နေပြီး ၊
လျှောက်လည်ဖို့ စီစဉ်လိုက်တဲ့ အတွက် ၊
London Pass နှင့် Day Travel Cards တွေဝယ်ရတယ် ၊
London Eye ၊ Mdm Tussaud ၊ Buckingham Palace ဝင်ခတွေ ၊
Hilton Kensington Hotel မှာ ၃ ရက်စာ ပေးရတာတွေက ၊
နောက်ထပ် $ 1000 ကျော် ထပ်ကုန်သွားတယ် ခည ။
အဲဒီတော့ ၊ အခုလောလောဆယ် ကုန်တာက ၊
နှစ်ယောက်ပေါင်း $ ၂၀၀၀၀ ကတော့ကျော်သွားပြီဗျာ ။
အဲဒါတောင် နေ့လည်စာ ၊ ညစာ က ၊
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဝယ်စားရမှာဗျာ ။
ဥရောပ မှာ Optional Excursion တွေအတွက် ထပ်ပေးရဦးမယ်ဗျာ ။
Tip တွေလည်း ထပ်ပေးရအုန်းမယ်ဗျာ ။
အင်း ၊ နောက်ဆုံး $ 30000 ဖြစ်သွားမှာပါပဲ ။
အဘ လည်း သည်ခရီးက အပြန်မှာ ၊
တစ်ခါတည်း ဒေဝါလီ ခံရမယ် ထင်တာပဲ ။
သူကြီးက စာမူခ ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ၊
တော်သေးမယ် ထင်တာပဲ ။
အဘရေ …… သွားသာသွား မပူနဲ့ သူကြီးက အဘကိုစာမှုခ 30000 လောက်တော့ ပေးမှာ သေချာတယ် …….. အဘ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စရိတ်ကာမိတာပေ့ါလေ …… အော်မေ့လို့ 30000 ဆိုတာ $ တော့မဟုတ်ဘူးနော် …. Kyat ….. ဟီး ဟီးးးးးးးး
၁လကျော်ကြာတဲ့ခရီး ဒေါ်လာ၃သောင်းဆိုတော့ အတော်တန်ပါတယ်အဘ။ နိုင်ငံတွေလည်းစုံတယ်လေ။ ကျမအထင် အဲဒီထက်မကကုန်သွားနိုင်တယ်။ မီလန်နဲ့ဗင်းနစ်သွားခဲ့တုန်းက အဲဒီကုန်ကျစရိတ်ရဲ့၃ပုံ၁ပုံလောက် သုံးခဲ့ရလို့ပါ။
မသိတော့ပါဘူး PEACEMAKER ရေ ။
အဘ ဘဝက မိန်းမ ကြိုးဆွဲရာ ကရတဲ့ ဘဝပါ ။
သူ ရွေးတာလေ ။
အဘဖော ခညာ …
အဲ့ဂ ပြန်လာရင် အနော်တို့အတွက်
လက်ချောင် ယူခဲ့ဘာအုံးနော် ..
Haveasafe time!! ဘဘ FR
အာပါး တာ့တာ …. ဖလိုင်းကစ် …
ပြန်လာလျှင် တမီးကို ယောကျာ်းဝယ်…… အဲ အဲ … ၀ုတ်ဘူး …. မုန့်ဝယ်ခဲ့ …. ခွိခွိ ။
ဘုံးကျော် လောက်က ဘဖော စနားတယ်လို့
ဝိုး…သုံးသောင်း….ကာကောင်းတစီး အသာလေး ဝယ်စီးလို့ရတယ်။ မိန်းမလစ်တာနဲ့ ရိုက်ပစ်ဗျာ အဖြူမတွေ အကုန်လုံးကို….ဓါတ်ပုံ ဓာတ်ပုံ…
ဗဟုသုတလေးတွေမျှဝေပေးပါလို့။ ပျော်ရွှင်ပါစေ အဘဖော။
အဘဖော ပေါ်တာ အဆွဲခံသွားရသတဲ့.. ဘယ်လိုနေသေးလဲ အဘ.. လုံလုံခြုံခြုံနေပါ အဘရယ်..
ဟုတ်ကဲ့…… ဘဘဖော မီးမီးအိမ်မှာ … အဲဝုတ်ဘူး …….ရွာမှာ လိမ်လိမ်မာမာနဲ့ တစ်ရွာလုံးဗြောင်းဆန်အောင် မွှေထားပေးပါ့မယ် …… ပြန်လာရင်တော့ လက်ချောင်လေးဝယ်ခဲ့နော် …. ခစ်ခစ်ခစ်
ခရီးစဉ်မှာ Lourders ပါတယ်ဆိုတော့ အဘတို့ခရီးစဉ်မှာ Catholic တွေပါတယ်ထင်တယ်. အရမ်းသာယာတယ်.. ဘုရားဖူးတွေလည်းအဲဒီအချိန်အရမ်းများလိမ့်မယ်… ဘာသာမတူသူတွေလည်း Grotto ဘေးကစမ်းရေထဲကို ကျန်းမာေ၇းကောင်းစေတယ်ဆိုပြီးဖြတ်ကြတယ်.. အကျီတွေတော့ချွတ်ရတယ်.. အဘလည်းဖြတ်ခဲ့ပေါ့.
သမီး Crystalline ရေ ။
St. Bernadette’s grotto ဘေးက ၊
စမ်းချောင်းလေး အကြောင်း ရှင်းပြတဲ့အတွက် ၊
အဘရှင့် အားကျလိုက်တာ..ထပ်သွားချင်သေးတယ်.. သမီးသွားတုန်းကတော့ အဓိက အီတလီပေါ့. ၁၅ရက်လောက်အနှံ့လည်ခဲ့တယ်..အင်္ဂလန်မှာတော့ အလုပ်နေရာတွေကလွဲရင်မရောက်ခဲ့ရဘူး.. ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီ မှာ၂ရက်စီနေခဲ့တယ်.. ကံကောင်းတာက တည်းခိုတာအစ်မအိမ်မှာ နဲ့မိတ်ဆွေတွေအိမ်မှာဆိုတော့ ခရီးစရိတ်ကလွဲရင်မကုန်ခဲ့ဘူး.. ကိုယ်က ကလေးဆိုတော့မုန့်ဖိုးတွေလည်းပေးကြသေးတယ်. လက်ဆောင်တွေဝယ်ပေးကြတယ်လေ.. ပျော်ရွှင်စရာအတိနဲ့ခရီးဖြစ်ပါစေ
အဘ သိပ်အပျော်ကြီး မဟုတ်လှဘူးကွယ့် ။
အသက် ကွာတယ် သမီးရဲ့ ။
သမီး အရွယ်ဆို အရမ်းပျော်မှာ သေချာတာပေါ့ ။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က အဘ တရုတ်ပြည် ၁၄ ရက် ခရီး သွားခဲ့တယ် ။
အပြန်မှာ တော်တော် ပင်ပန်းတယ်ကွယ့် ။
အခု စုစုပေါင်း တစ်လ နှင့် ၃ ရက် ။
အရမ်း ပင်ပန်းလိမ့်မယ် ။
အဘ အဘ..ဒါ့ပုံတွေ အများကြီးရိုက်ခဲ့နော်… Bordeaux က ၀ိုင်တစ်ပုလင်းလောက် ၀ယ်လာခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲ…
ဲဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် အသေးစိတ်တွေကအစ သိချင်သား..ဗဟုသုတအနေနဲ့ပေါ့…
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခရီးစဉ် ဖြစ်ပါစေ အဘ….
သမီး လုံမလေး မွန်မွန် ရေ ။
Bordeaux က Wine နာမည်ကြီးလို့လားကွဲ့ ။
အဘ က အရက် မသောက်တတ်တော့ သိပ်မသိဘူးကွဲ့ ။
Bordeaux မှာ တစ်ည အိပ်မယ် ။
အဲဒီည Dinner ကျွေးမယ်လို့ ပါတော့ ၊
Dinner မှာ Wine ပါမှာ သေချာတယ်ကွယ့် ။
နွားကို ပလာတာ ကျွေးသလိုပဲ ဖြစ်နေပါမှာ ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သမီးရဲ့ သတင်းပေးမှု အရ ၊
အဘ အရသာခံ သောက်ကြည့်ခဲ့ပါ့မယ် ။
ဟုတ် အဘ… Bordeaux ၀ိုင်က နာမည်ကြီးတွေထဲက တစ်ခုပါ… Champs-Élysées မှာ လမ်းလျှောက်ရင်း ရေမွှေးဆိုင်တွေတွေ့ရင်လည်း ၀င်ခဲ့နော်.. Eiffel Tower ပေါ်ကလည်း ဒါ့ပုံတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့ပေးနော်…
” ရေမွှေးဆိုင်တွေတွေ့ရင်လည်း ၀င်ခဲ့နော် ”
ပြောရက်ပါပေ့ သမီးရယ် ။
မိန်းမ အဲလို ဆိုင်ကြီးတွေကို ဝင်မှာ အဘ အကြောက်ဆုံးပဲ ။
အထူးသဖြင့် ၊ ပြင်သစ် နှင့် အီတလီ ။
တော်ကြာ ဟို L နှင့် V လေးရေးထားတဲ့ အိတ်လေးက ၊
အရမ်းလှတာပဲ ဆိုရင် ၊ သွားပေါ့ ၃ / ၄ ထောင် ။
ဆွစ် ကတော့ သိပ်မကြောက်ဘူး ၊
နာရီဝယ်ထားတာ သိပ် မ ဟောင်းသေးဘူး ။
အခုတောင် London က Harrods ကုန်တိုက် ၊
သွားမယ် ဆိုပြီး စီစဉ်နေလေရဲ့ ။
အမှန်တော့ အဘ မိန်းမ ရဲ့ ဝင်ငွေဟာ ၊
သာမာန် Captain တစ်ယောက် လစာ ရဲ့ ၊
၅ ဆ ကျော် ပိုများပေမယ့်လည်း ၊
မိန်းမ ဆိုတော့လည်း ၊ သူ့ယောက်ျား ဝယ်ပေးတာကို ၊
အမြတ်တနိုး နှင့် လိုချင်သေးတာကိုး ကွယ့် ။
သြော် ၊ ဒုက္ခ ၊ ဒုက္ခ ။
အဘဖော..ပေါ်တာဆွဲခံရတယ်ဆိုတော့..ခရီးစဉ်တလျှောက် အဘေဖောရဲ့ချစ်ဇနီးချောဝယ်သမျှ နောက်ကနေ မနိုင်မနင်းသယ်ပိုးထမ်းရွက်တဲ့ပုံလေးလည်း ရိုက်ခဲ့ဦးနော်..ဟီးဟီး..
ကြုံတုန်း ပြောလိုက်ဦးမယ် ။
အဘ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် ဥရောပ သွားတော့ ၊
ဆွစ်က Rolex Centre ကို သွားကြည့်တယ်ပေါ့ ။
သူကတော့ အေးဆေးပါပဲ ၊
ဘောင်းဘီတို နှင့် ညှပ်ဖိနပ် နှင့်ကိုသွားတာကိုး ။
အဲဒီမှာ နာရီလေး ဘာလေးဝယ်ရင် ကောင်းမှာပဲ ဆိုပြီး ၊
တံခါးဝ က တံခါးစောင့် ဝန်ထမ်းကိုပြောတော့ ၊
အဲဒီ ဥရောပသား ငမွဲ ဝန်ထမ်း က ၊
သူ့ကို အပေါ်ဆုံးထပ်ကို ခေါ်သွားတယ်လေ ။
အပေါ်ဆုံး ထပ်က ဈေးပေါတဲ့ Rolex တွေပဲထားတာလေ ၊
အဲဒါနှင့် မကြိုက်တာနှင့် အောက်ဆုံးထပ် အထိ ဆင်းလာပြီး ၊
ဒေါ်လာ ၇ သောင်းခွဲတန်တဲ့ Rolex ကို ဝယ်လိုက်တော့မှ ၊
အဲဒီ ကျေးဇူးရှင် ဝန်ထမ်းတွေ မျက်လုံးကို ပြူးကုန်ကြတာလေ ။
ဘယ်နိုင်ငံကလည်း ၊ ဘာလုပ်သလဲ နှင့် ပြာပြာသလဲ ဖြစ်ကုန်ကြတာ ။
ဒီ ဥရောပသားတွေ ဒို့ ဗမာတွေကိုများ အထင်သေးလို့ ၊
ဟိုတစ်နေ့က မြန်မာ ကားပြပွဲမှာ ၊
Roll Royce တွေ ၊ Maybach တွေ ကို ၊
တစ်စီး သိန်း ၅၄၀၀ နှင့် ချရောင်းနေပြီ ။
ဥရောပမှာဖြစ်ဖြစ် တစ်ခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ဥရောပသားပိုင်..formalဖြစ်တဲ့နေရာတွေ ဥပမာ အဆင့်မြင့်စားသောက်ဆိုင်၊ အဆင့်မြင့်ဟိုတယ် အဲလိုနေရာမျိုးတွေကိုဝင်တော့မယ်ဆို အ၀တ်အစား၊ ဖိနပ် စတာတွေကို သေသေသပ်သပ် လူရိုသေရှင်ရိုသေ၀တ်ရပါတယ်။ သရီးကွာတားဝတ်သွားမယ် ညှပ်ဖိနပ်တို့ ဂွင်းထိုးတို့ အဲဒီလိုမသေမသပ်ဝတ်ပြီးဝင်လို့မရပါဘူး။ လူ့အသားအရေနဲ့ဆုံးဖြတ်တာ အထင်သေးတာ အဆင့်အတန်းခွဲခြားတာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါက ကျမသူငယ်ချင်းဆွစ်လူမျိုး (လူချောလူခန့် သူဌေးရုပ်နဲ့) အာရှကအီတလီစားသောက်ဆိုင်ထဲ သရီးကွားတားနဲ့ဝင်သွားလို့ လုံးဝအ၀င်မခံပါဘူး။
” သရီးကွာတားဝတ်သွားမယ် ညှပ်ဖိနပ်တို့
ဂွင်းထိုးတို့ အဲဒီလိုမသေမသပ်ဝတ်ပြီးဝင်လို့မရပါဘူး ”
PEACEMAKER ပြောတာ ၊
အဲဒါကတော့ မှန်ပါတယ်ကွယ် ။
အဝတ် အစား ကလည်း အရေးကြီးပါတယ် ။
ရောမလို ကျင့်သင့်သပေါ့ကွယ် ။
အဘ ဆိုလိုရင်းက ၊
ဥရောပသားတွေ စီးပွားရေး ကျလာချိန်မှာ ၊
မြန်မာတွေ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ ချမ်းသာလာနေပြီလို့ ၊
ဒို့ လဲ အားကျမခံ တောင်ဥက္ကလာ မြောက်ဥက္ကလာ၊ တောင်ဒဂုံ မြောက် ဒဂုံ၊ တောင်မြောက်လမ်းဆုံကနေ
ရွာသာကြီးတစ်ခွင် ပြဲပြဲစင် အောင် ဆိုက်ကားနဲ့ပတ်လည်ပြီး တစ်ပုဒ်ရေးဦးမယ်
မရွေးရင် ပုလင်းနဲ့ထုမယ်
အဘဖော ပေါ်တာအဆွဲခံရခြင်းဆိုလို့ အလန့်ထညက်ရှိလိုက်တာ။
(တော်ကြာ ဆုပေးပွဲစပွန်ဆာ မရှိလို့ အညာဖာလူဒါ (ရေခဲရေ) နဲ့တင် ပြီးသွားမှာစိုးလို့)
စာဖတ်ပြီးမှပဲ ပေါ်တာအဆွဲခံရသူရဲ့ ပြုံးဖြီးဖြီး မျက်နှာကြီးကို မြင်ယောင်လာတယ်။
အဘ ဘဝ ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ဗီတို ပိုင်ရှင် ၊Home Minister ရဲ့ တစ်ချက်လွှတ် အမိန့်တော်အရ ၊ ဆိုပါလားအဘရယ်
အနော် မိန်းမနဲ့များကွာဘ… အနော့ မိန်းမဆိုရင် အဲဒီလို ကမ္ဘာပတ် ခရီးဝေးမပြောနဲ့ အိမ်ပေါ်က အိမ်အောက်ဆင်းတာတောင် မကြိုက်ဘူးဗျ..။ အဟိ..အဘတို့ များ ကံကောင်းလိုက်ပုံများ ….။
Comment ကို ကလိကြည့်လိုက်တာ ဘာတွေဖြစ်သွားလဲမသိဘူး..။ လွန်တာရှိရင် ၀န်တာမိ ပါ အဘရေ…။
Jack DeBoer ကပြောတယ်။ (သူက ကမ္ဘာပတ်ခရီးကို သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ပတ်ခဲ့သူပါ။ သူက တိုးရစ္စတွေအတွက် စီစဉ်ထားတဲ့ ကမ္ဘာပတ်နည်းကို မကြိုက်ဘူး။) ၄လတာ ကမ္ဘာပတ်ခရီးစဉ်အပြီးမှာ သူ့နှလုံးသားဟာ မြန်မာပြည်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါပြီတဲ့။ ဘဖောလည်း ဘဖောရဲ့ နှလုံးသား ဘယ်မှာကျန်ခဲ့လဲ ပြောဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။